Ukuhlola Izinkomba Zakho Zokumaketha Ku-inthanethi | Martech Zone
Enye yezinto ezinhle mayelana nokumaketha okuku-inthanethi ukuthi umsebenzi wakho uvulekele umhlaba ngokuphelele ukuthi uwubone. Njengoba kunikezwe iqiniso lokuthi linjalo, kungenza ngizibuze ukuthi izinkampani, ama-ejensi, kanye nohulumeni wethu wesifunda ucabangani lapho beqasha usizo.
Kuhle kakhulu ukufaka abafanelekayo kwezentengiso ku-inthanethi:
Uma ufuna i- I-Search Engine Optimization firm, yeka ukubuka! Amafemu amahle kakhulu we-SEO angama-ejensi angongoti besiteshi sama-omni, abona ukuthi okuqukethwe, i-imeyili, iselula, nezenhlalo konke kuthinta kanjani imiphumela yenjini yakho yokusesha. I-SEO ibiyinkinga yezibalo, ukuthola imiphumela ekumakethweni kwezinjini zokusesha kuyinkinga yomuntu futhi kudinga okungaphezulu kakhulu kwezinsuku zokufakwa kwegama elingukhiye. Ukuqasha i-SEO firm kungonakalisa igunya lenkampani yakho iminyaka - ngakho-ke qhubeka ngokuqapha okukhulu.
Uma ufuna i- Isazi sezokuxhumana, funa umuntu osiza amabhizinisi afana nelakho ukukhulisa ukufinyelela kwawo ezinkundleni zokuxhumana. Angisho umuntu othenge abalandeli abaningi. Angiqondile isikhulumi sosuku noma umbhali onamasu ahlukile kunebhizinisi lakho. Ngikweluleka ukuthi uchithe isikhathi esithile ku-inthanethi futhi ubuze ukuthi ngubani okhona lapho osiza amabhizinisi afana nelakho. Abanye babaluleki engibathandayo embonini aziwa… kepha amaklayenti abo anyuke kakhulu.
Uma ufuna i- Ukuqina Kwezimpawu noma Kokuqamba khumbula ukuthi ubuhle bucijile kuphela esikhunjeni ngamawebhusayithi, futhi! Sisebenze namakhasimende afutha isabelomali sawo enkampanini yokubeka uphawu esule amazinga abo okusesha futhi aqeda ukugeleza kwabo kwemikhondo engenayo. Amafemu amahle wokuklama ayazuzisa, kepha kuphela uma aqinisekisa ukuthi uyaqhubeka nokukhulisa imiphumela yebhizinisi lakho, hhayi nje ukwakha isayithi noma i-logo enhle.
Uma ufuna i- I-ejensi Yokumaketha eku-inthanethi, iya ezinkampanini othanda ukuxhumana nazo ku-inthanethi uthole ukuthi zisebenzisela bani ukumaketha. Funa abantu abanesayithi elihle, uhlelo oluhle lwe-imeyili, bathola imiphumela yosesho futhi bavele ezinkundleni zokuxhumana. Ngamanye amagama, funa izinkampani osebenza nazo ezizungezwe kahle. Buza udokotela wamazinyo wakho, buza ilunga le-Pizza langakini, buza abathengisi bakho, buza uplamba wakho… .buza… buza… buza. Uma uphendula ekukhangiseni kwabo, maningi amathuba okuthi nabanye bayaphendula.
Ungacabangi ukuthi awukwazi ukukhokhela inkampani. Ungacabangi ukuthi bamatasa kakhulu ukukusiza. Izinkampani ezinkulu zizokuthumela kwabanye abangakusiza uma bengenazo izinsiza noma bengekho ebangeni lakho lentengo.
Tags: agencyi-ejensi yokubeka uphawuuphawu lokuqinisa uphawuinhlangano yokukhangisaejensi yezentengiso onlinesearch wezokuthengisai-optimization firmlokho okuqinileinkampani yezokumaketha kwezenhlaloumxhumanisi wokumaketha kwezenhlaloumxhumanisi wezokuxhumana
# Happyweekgivinggiving kanye #indytweetsgiving